अब कुनै पनि बच्चाले कान्तिमा पैसा र बेड अभावमा मर्नुपर्दैन – Health Post Nepal
अब कुनै पनि बच्चाले कान्तिमा पैसा र बेड अभावमा मर्नुपर्दैन
२०७६ कार्तिक २४ गते १०:४१
कान्ति सरकारद्वारा सञ्चालित मुलुककै एक मात्र केन्द्रीय बाल अस्पताल हो । यहाँ देशका कुना–कुनाबाट उपचारका लागि बिरामीको घुइँचो लाग्ने गर्छ । केही समयअघि स्वास्थ्यकर्मी र बजेट अभावले अस्पतालमा सेवा–सुविधा न्यून हुँदा अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हल्लासमेत फैलिएको थियो । बेड अभावमा दैनिक ८–१० जना बिरामीलाई रेफर गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
करिब ४ महिनाअघि वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डा. आरपी बिच्छाको हातमा अस्पतालको नेतृत्व आएपछि अस्पतालको सेवा–सुविधामा केही परिर्वतन आएको अनभूति सेवाग्राहीले गर्न थालेका छन् । डा. बिच्छाले नेतृत्व लिएपछि अस्पतालमा केकति परिवर्तन भए ? सेवा–सुविधा थप ताथा विस्तारमा के–कस्तो प्रगति भयो ? अबका योजना के छन् ? यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर निर्देशक डा. बिच्छासित हेल्थपोस्टकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।
कान्तिको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको ४ महिना बित्तिसकेको छ, यसबीचमा के सुधार गर्नुभयो ?
म निर्देशक भएर आउँदा अस्पतालसामु प्रमुख रूपमा २ समस्या वा चुनौती थिए, जसलाई मैले अवसरका रूपमा पनि लिएँ । हामीकहाँ देशभरका सिरियस बच्चा उपचारका लागि आउने गर्छन् । त्यसमा दैनिक ६ देखि ८ बच्चा बेड नपाएर बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था थियो । यहाँ बेड नपाउँदा आफ्नो घर–घडेरी, गहना सबै बेच्नुपर्ने अवस्था थियो । मेरो बच्चा कान्तिमा लैजाँदै छु, पक्कै पनि बाँच्छ भन्ने आशाले दुःखजिलो गरेर अस्पताल आइपुग्दा बेड नपाउँदाको क्षण अभिभावकलाई कस्तो अनुभूति होला, जो–कोहीले कल्पना गर्न सक्छौँ ।
कान्तिमा बेड नपाउँदा अन्य निजी अस्पतालको कमाइखाने बाटो बनेको छ । यहाँ बेड नपाएका बच्चालाई आसपासका नर्सिङहोमहरूमा दैनिक २५ देखि ३५ हजारसम्म चार्ज तिरेर राख्ने र दुई–चार दिनमा पैसा सकिएपछि फेरि उठाएर कान्ति आउँदा फेरि पनि बेड खाली नभएका कारण कम्पाउन्डमै बच्चाको मृत्यु हुनेजस्ता दुःखद घटना देखिँदै आएका थिए । यो अवस्था बच्चाको डाक्टरका लागि असह्य पनि थियो ।
यो सेवा सुरु हुनुअघिको अन्तिम महिनामा हेर्दा ८४ बच्चालाई रेफर गरिएको थियो, तर हालको तथ्यांकलाई हेर्दा १६ बिरामीलाई मात्र रेफर गरिएको छ । यसको मतलब ७० प्रतिशतभन्दा बढीले रेफरमा कमी आएको छ, जसका कारण जनताले ठूलो राहत पाएका छन् । जहाँसम्म बाँकी ३० प्रतिशतको कुरा छ, त्यसका लागि पनि हामीले एक मास्टर प्लान बनाएका छौँ । हामीसँग जुन संरचना छ, त्यसमा कम्तीमा १० बेडको भेन्टिलेटर थप गर्ने र १ महिनाभन्दा कमको (न्यु वन) इन्टरमेडिएट बेड हाल १५ रहेकोमा २० बनाउने योजनाअनुसार हामी लागिपरेका छौँ । यसले रेफरको समस्यामा २० प्रतिशतले कमी ल्याउँछ ।
म प्रवेश गरेको दोस्रो दिन नै यस विषयमा के गर्न सकिन्छ भनेर पूरै कन्सल्टेन्टलाई बोलाएर छलफल गरेँ । छलफलपछि विशेषज्ञको टोली बनाएर यो समस्या समाधान गर्न ७ दिनभित्रमा केही उपाय दिनुहोस् भनेँ । ७ दिनमा प्रतिवेदन आयो । प्रतिवेदनमा पहिलो स्टेपका रूपमा १० बेडको पेडियाट्रिक इन्टरमेडिएट केयर बेड राख्ने भन्ने सुझाब आयो । आइसियू किन भरिभराउ हुन्छ भने कुनै बच्चालाई भेन्टिलेटरविना पनि आसियू चाहिन्छ, जसलाई हामी इन्टरमेडिएट केयर भन्छौँ । अहिले हामी यो बेडको स्थापनासँगै अक्सिजन र अन्य औषधि दिएर ठिक पारेर पठाउँछौँ । पहिले सिरियस अवस्थामा आएको बच्चालाई आसियू बेड खाली छैन भनेर फर्काउनुपर्ने अवस्था थियो । धेरैजसो बच्चालाई इन्टरमेडिएट केयरमा ३ दिन राख्यौँ भने ठिक भएर वार्डमा पठाउन सकिन्छ । यो अवधारणमा १० बेडको पेडियाट्रिक इन्टरमेडिएट केयर आसियू सुरु गर्यौँ भने मोटामोटी रूपमा ६० देखि ७० प्रतिशत रेफर कम हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन आएपछि सबै विभागबाट जनशक्ति तानतुन गरेर १० बेडको पेडियाट्रिक इन्टरमेडिएट केयर आसियू सुरु गर्यौँ ।
अर्को भनेको अस्पतालमा ब्लड बैंकको समस्या थियो । राती १२ बजे धेरै ठाउँमा डुलेर रगत ल्याउँदा सेवाग्राहीले धेरै नै सास्ती खेप्नुपरेको थियो । हाल हामीले यसको समाधानका लागि तयारी पूरा गरेका छौँ । रेडक्रसको सहयोगमा ५ जनालाई तालिम दिएका छौँ । अस्पतालमै ब्लड बैंक सुरु गरेका छौँ । हाम्रो गुरुयोजना बनेको छ कि– २–३ महिनामा ब्लडका ६ वटा कम्पोनेन्ट छुट्टाछुट्टै छुट्याउँछौँ र जसलाई जे आवश्यक पर्छ त्यो किसिमको अत्याधुनिक सेवा सुरु गर्छौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट सुरु गर्न लागेका छाैँ ।
पहिला अल्ट्रासाउन्ड गर्न १ बजेपछि आउने बिरामीले सेवा पाउँदैनथे, हाल २ देखि ६ बजेसम्म अर्को सिफ्ट गरेर सेवा सुचारु गरेका छौँ । त्यसैले यी सेवाहरू सुचारु गर्दा र थप व्यवस्थित हुँदै जाँदा पक्कै पनि सेवाग्राहीले सहज महसुस गरेको हुनुपर्छ । मैले एउटा लक्ष्य र समयसीमा निर्धारण गरेको थिएँ, अहिले आफू स्वयम्ले मूल्यांकन गर्दा पनि जे गर्नुपर्ने थियो त्यसैअनुरूप काम भएजस्तो मलाई लाग्छ ।
समस्त देशवासीलाई भन्न चाहन्छु कि, कान्ति बाल अस्पताल सरकारी अस्पताल हो, जहाँ हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सेवा–सुविधा दिइरहेका छौँ । त्यसैले निजी अस्पतालमा राम्रो सेवा पाइन्छ भन्ने मानसिकता अहिलेबाटै त्यागिदिनुहोस् । म गौरवका साथ भन्छु, बच्चामा क्यान्सरको उपचारमा हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा दिइरहेका छौँ । त्यसैगरी, बोन केयर आइसियू सेवामा कान्ति एसियाकै टप सेन्टरका रूपमा रहेको छ । विश्वास गरेर हाम्रो अस्पतालमा आउनुहोस्, तपाईंले उत्कृष्ट सेवा पाउनुहुनेछ ।
अस्पताललाई अब कुन–कुन सेवा थप चाहिएको छ ? कुन–कुन सेवा सुरु गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
बच्चाको उपचारमा आँखा र हड्डीको सबस्पेसलिस्ट जरुरी छ । मैले मन्त्रालयसँग यस विषयमा पहल गर्दै आएको छु । दुर्भाग्य के छ भने हामीकहाँ त्यसको दरबन्दी छैन । पहिले दरबन्दी बनाउँदा यो सोच आएन । मन्त्रालयले अहिले ओएनम गरिरहेको छ, त्यसमा समावेश गरेर पठाएका छौँ । मन्त्रालयका अनुसार अर्को महिनासम्म ओएनम पूरा भएपछि नयाँ दरबन्दीमार्फत नयाँ सेवा सुचारु गर्छौं ।
कान्तिमा अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट अभावका कारण सेवा बाधित भएका गुनासा निकै सुनिन्थे । यसमा तपाईंको अनुभव के छ र यसको हल कसरी निकाल्नुहुन्छ ?
केन्द्रीय अस्पतालको निर्देशकको हैसियतले भन्नुपर्दा अस्पतालले प्रवाह गरेको सेवाको हिसाबले बजेट पाउनुपर्ने हो, तर प्राविधिक कारणले त्यसो हुन सकेको छैन । यसका निम्ति मन्त्रालयलाई दोष दिनेभन्दा पनि हाम्रो सिस्टमकै कमी–कजोरीका कारण यस्तो भएको हो । मन्त्रालयले पूरै देशका अस्पतालका लागि सिलिङ तोक्छ, त्यो सिलिङभित्र रहेर हामीले आफ्नो बजेट बनाएर पठाउनुपर्छ । यो सिलिङ तोक्ने तरिकामै गडबडी छ । उदाहरणका लागि एउटा अस्पतालले ०७४÷७५ मा कति सेवा दियो र त्यसबापत कति खर्च भयो, आउने वर्षमा उसको सेवा र खर्चमा कति वृद्धि हुन सक्छ भन्ने वैज्ञानिक अनुमान गरेर मात्र सिलिङ तोक्नुपर्छ । तर, सिलिङ तोक्ने प्रचलित अभ्यास त्यस्तो छैन, जुन त्रुटिपूर्ण छ । यसका कारण कुनै ठाउँमा बजेट फ्रिज भइरहेको छ भने कतै अपुगको अवस्था छ ।
कान्तिमा केमिकलमा गत वर्ष साढे ४ करोड खर्च भएको थियो । यस वर्ष खर्च अझै बढ्ने निश्चितप्रायः छ । तर, चालू आर्थिक वर्षमा त्यो शीर्षकको बजेट सिलिङ भने मात्र ३ करोडको छ । बढी खर्च हुने अनुमान हुँदाहुँदै उल्टै एकचौथाइ घटाएर बजेट विनियोजन गरिँदा हामीलाई अन्तिम चौमासिकमा अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ । त्यतिवेला कहाँबाट कसरी रकम जुटाउने भन्ने दौडधुप सुरु हुन्छ । तर, अस्पतालहरूलाई एउटा सुविधा छ, विकास समितिको कमाइबाट तिर्न सक्छौँ ।
कान्तिले जनशक्तिको चरम अभाव झेलिरहेको छ भन्ने सुनिँदै आएको छ नि ?
कान्तिमा मात्र नभएर पूरै देशमा जनशक्तिको अभाव छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डमा सेवा दिने हो भने हामीसँग एकचौथाइ मात्र दरबन्दी छ । यसमा विशेषगरी डाक्टर र नर्सको अभाव छ । ०५२ मा जुन ओएनम सर्वे भएको थियो, त्यहीअनुसारको दरबन्दी हालसम्म कायम छ, जब कि जनसंख्या ३ गुणा बढिसकेको छ । त्यसकारण नेपालमा तत्कालै ओएनम जरुरी छ । कान्तिको ओएनम सर्वे पठाउँदा आउने २० वर्षसम्मका लागि पनि योजना पेस गरेको छु । १ वर्षको ओएनम बनाउँदा अर्को वर्षदेखि फेरि टाउकोदुखाइको विषय बन्न जान्छ ।
अब कान्ति भनेर आउने बिरामीले सेवा नपाएर फर्कनुपर्छ कि पर्दैन ?
नेपाल सरकारले धेरै राम्रो गरेको छ । जस्तो कि, सामाजिक सुरक्षा एकाइ छ, सरकारले केही अनुदान दिने गरेको छ । यसबाट अति गरिब, सहाराविहीनलाई निःशुल्क सेवा दिँदै आएका छौँ । उदाहरणका लागि गरिब परिवारको कुनै बच्चाले एक महिनासम्म अस्पतालमा उपचार गराउँदा ७५ हजार खर्च भयो भने त्यो सामाजिक सुरक्षा सेवा एकाइबाट उसले पाउँछ र एकाइलाई सरकारले दिन्छ । तर, यसमा नैतिकताको भने समस्या छ । त्यो सहुलियत वास्तविक गरिबले पाइरहेको छ कि छैन, त्यसको भने राम्ररी अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
निर्देशकको नाताले म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, कुनै पनि गरिब परिवारको बच्चाको उपचारका लागि जे गर्नुपर्छ, जहाँबाट गर्नुपर्छ, कान्तिमा हामी निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउँछौँ । क्यान्सर भएको एक बच्चाका लागि हामीले ७–८ लाखसम्मको उपचार निःशुल्क गराएर पठाएका छौँ ।
अन्तमा सेवाग्राहीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?